Mmadụ Ò Nwere Ike Ịrụ Ọrụ Ọma n’Ụbọchị Izu Ike? | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS EKWUSAA OZI ỌMA NA JUDIA
JIZỌS AGWỌỌ OTU NWOKE NA-ARỊỌ ỌRỊA, ONYE NỌ N’AKỤKỤ OTU ỌDỌ MMIRI
Ihe Jizọs rụpụtarala n’ozi ọma niile o kwusara na Galili abụghị obere ihe. Mana, mgbe o kwuru na ya ‘aghaghị izisara obodo ndị ọzọ ozi ọma alaeze Chineke,’ ihe o bu n’obi bụ na ya ga-ekwusakwa ozi ọma n’ebe ndị ọzọ na-abụghị Galili. N’ihi ya, ọ “gara n’ihu ikwusa Alaeze ahụ n’ụlọ nzukọ ndị dị na Judia.” (Luk 4:43, 44) Ihe a o mere kwesịrị ekwesị n’ihi na ugbu a bụ oge opupu ihe ubi, e nwekwara ememme a na-eme na Jeruselem nke ruwerela nso.
Ihe ndị e dere n’Oziọma anọ ndị ahụ gbasara ozi ọma Jizọs kwusara na Judia dị obere ma e jiri ya tụnyere ihe e dere gbasara ozi ọma o kwusara na Galili. N’agbanyeghị na ọtụtụ ndị Judia anabataghị ozi ọma Jizọs kwusara, o meghị ka ọ kwụsị ikwusasi ozi ọma ike na ịrụ ọrụ ọma ebe ọ bụla ọ gara.
N’oge na-adịghị anya, Jizọs gawara isi obodo Judia bụ́ Jeruselem maka Ememme Ngabiga nke afọ 31. E nwere otu nnukwu ọdọ mmiri a na-akpọ Betzeta nke dị n’ebe na-ekwo ekwo dị nso n’Ọnụ Ụzọ Ámá Atụrụ. Ọtụtụ ndị ahụ́ na-adịghị, ndị ìsì, na ndị ngwọrọ na-aga n’ọdọ mmiri ahụ. Gịnị mere ha ji aga na ya? Ọ bụ n’ihi na ndị mmadụ kweere na ọ bụrụ na mmadụ adaba ná mmiri a mgbe o mere ụṅara, ahụ́ ga-adị onye ahụ mma.
N’otu Ụbọchị Izu Ike, Jizọs hụrụ otu nwoke n’ọdọ mmiri a, bụ́ onye na-arịa ọrịa kemgbe afọ iri atọ na asatọ. Ọ jụrụ nwoke ahụ, sị: “Ị̀ chọrọ ka ahụ́ dị gị mma?” Nwoke ahụ zara ya, sị: “Nna anyị ukwu, enweghị m onye ga-eme ka m banye n’ime ọdọ mmiri a mgbe mmiri a mere ụṅara; kama mgbe m na-abịa, onye ọzọ na-ebu m ụzọ abanye.”—Jọn 5:6, 7.
Jizọs kwuru ihe juru nwoke ahụ na onye ọ bụla ọzọ nụrụ ya anya. Ọ sịrị ya: “Bilie buru ihe ndina gị gawa ije.” (Jọn 5:8) Nwoke ahụ mekwara otú ahụ, ahụ́ adị ya mma ozugbo, ya eburu ihe ndina ya malite ịga ije.
Kama inwewe obi ụtọ n’ihi ihe ọma a merenụ, ndị Juu hụrụ nwoke ahụ malite ịbara ya mba. Ha sịrị ya: “Taa bụ Ụbọchị Izu Ike, iwu akwadoghịkwa ka i buru ihe ndina gị.” Nwoke ahụ zara ha, sị: “Ọ bụ onye mere ka ahụ́ dị m mma sịrị m, ‘Buru ihe ndina gị gawa ije.’” (Jọn 5:10, 11) Ị̀ hụkwara na ndị Juu a wesawara onye gwọrọ mmadụ ọrịa n’Ụbọchị Izu Ike iwe?
Ha chọrọ ịma onye gwara nwoke ahụ buru ihe ndina ya gawa ije. Ha jụrụ ya, sị: “Ònye bụ onye ahụ sịrị gị, ‘Buru ya gawa ije’?” Gịnị mere ha ji jụwazie nwoke a ajụjụ a? Ọ bụ n’ihi na “Jizọs esiwo n’ebe ahụ pụọ” baa n’etiti ìgwè mmadụ, nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa amaghịkwanụ aha Jizọs. (Jọn 5:12, 13) Mana, nwoke a na Jizọs ka ga-ahụ ọzọ. Ka e mechara, nwoke ahụ hụrụ Jizọs n’ụlọ nsọ ma matazie onye Jizọs bụ.
Nwoke ahụ hụrụ ndị Juu ahụ jụrụ ya onye mere ka ahụ́ dị ya mma ma gwazie ha na ọ bụ Jizọs. Mgbe ha nụrụ na ọ bụ Jizọs, ha gakwuuru ya. Ihe mere ha ji gakwuru ya, ọ̀ bụ ka ha mata ebe Jizọs nwetara ike o ji na-arụ ọrụ ebube ndị a? Mba. Kama ọ bụ ka ha katọọ Jizọs maka na ọ rụrụ ọrụ ọma n’Ụbọchị Izu Ike. Ha malitedịrị imegide ya.
Gịnị mere Jizọs ji gawa Judia, gịnịkwa ka ọ nọgidere na-eme?
Gịnị mere ọtụtụ ndị ji aga n’ọdọ mmiri a na-akpọ Betzeta?
Olee ọrụ ebube Jizọs rụrụ n’ọdọ mmiri ahụ, gịnịkwa ka ụfọdụ ndị Juu mere n’ihi ọrụ ebube ahụ ọ rụrụ?